P HostPapa Enweta Canada Dabere LFC Bochum - 【The Comparison】
Dodot Aqua Baby Wipes, 99% Mmiri, 432 Wipes, 9 Ukwu (9x48)
Ejiri mmiri 99% mee ka nhicha dị nro
HostPapa na-enweta Canada LFC Hosting
Ntanetị weebụ na onye na-eweta ọrụ igwe ojii HostPapa na-aga n'ihu na nnweta nnweta ya n'oge na-adịbeghị anya site n'ịkwusa na ọ nwetala ụlọ ọrụ websaịtị ọzọ nke Canada LFC Bochum maka ọnụọgụ a na-ekwughị.
Loose Jogging Computing Limited (LFC Hosting) hiwere na 1996, mana ọ bụ rue afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị ka ụlọ ọrụ ahụ malitere njem nnabata web na Regina, Saskatchewan.
N'afọ ndị sochirinụ, ụlọ ọrụ ahụ guzobere ebe data dị na Denver na Montreal ka ha na-aga n'ihu na-enye azịza web hosting dị ọnụ ala. N'ezie, Bochum LFC enyerela iri puku kwuru puku ndị ọrụ aka iwulite ọnụnọ n'ịntanetị gburugburu ụwa site na ịnye weebụsaịtị, ngalaba, nnabata Bochum, VPS hosting, na colocation.
LFC Hosting CEO Robert Sauchyn kọwara na pịa pịa otu ihe nnabata ya site n'aka HostPapa ga-enyere ya aka ịgbasawanye ọrụ ya, na-asị:
“LFC na-agbasi mbọ ike inye ndị ahịa anyị ọrụ pụrụ iche. Obi dị anyị ụtọ na anyị achọtala ezigbo onye anyị ga - ewega ọrụ a n'ọkwa ọzọ site na iji ikike na ike dị iche iche nke HostPapa. «
LFC Bochum bụ ugbu a HostPapa
Dabere na Andrew MacCorquodale, onye nduzi nke LFC Bochum, ọtụtụ ndị otu ụlọ ọrụ agbanweelarị na HostPapa dị ka akụkụ nke azụmahịa ahụ. Nke a ga - enyere aka hụ na ọtụtụ ndị ahịa LFC Bochum na - eguzosi ike n'ihe nye onye ọbịa ahụ n'akụkọ ihe mere eme ya niile.
Onye guzobere HostPapa na CEO Jamie Opalchuk kelere Robert na Andrew maka ọrụ ha ka ọ nabatara ndị ahịa LFC ndị ọbịa dị n'ụlọ ha, na-asị:
“Obi dị anyị ụtọ ịnabata ndị ahịa LFC na ezinụlọ HostPapa ma anyị chọrọ ịgwa ha na anyị ga-aga njem ọzọ iji hụ na afọ ojuju ha na ọrụ anyị. Achọrọ m ikele Robert na Andrew maka iwulite azụmahịa dị egwu na ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe.
Ozugbo emechiri azụmahịa ahụ, ndị ahịa Bochum LFC nwere ike ịtụ anya ịhụ ọtụtụ arụmọrụ arụmọrụ na atụmatụ ntanetị weebụ ha dịka akụkụ nke ntinye ego HostPapa na akụrụngwa azụmaahịa.